सबैले शुभकामना दिउँ ! अाज मेघा अडिसनमा कुन गित अाउदैछिन मेनुका? – Articles Nepal
सबैले शुभकामना दिउँ ! अाज मेघा अडिसनमा कुन गित अाउदैछिन मेनुका?
भारतकाे चर्चित रियालिटि साे सारेगमपकाे मेघा अडिसन अाजबाट सुरु हुदैछ । अडिसन राउण्ड पार गरेका प्रितस्पर्धीहरूले मेघा अडिसनमा अाफ्नाे प्रस्तुति राख्नेछन । त्यस्तै भारतकाे चर्चित रियालिटि साे सारेगामापाकाे इतिहासमै पहिलाे पटक नेपालीले सहभागीता जनाएका छन । नेपालकि चेलि मेनुका पौडेलले सारेगामापाकाे अडिसनमा तहल्का मच्चाइरहेकि थिइन । अडिसन राउण्ड पार गरेकि उनले सबैकाे मन समेत जित्न सफल भएकि हुन ।
नेपालीको झापा जिल्लामा जन्मिएकि मेनुका दुबै अाँखाकाे पहुचबाट बाहिर छिन तर उनी भित्र जादुमय संगितकाे खुबि का साथै कलात्मक गायनकाे क्षमता रहेकाे छ । जसकाे कारण यतिबेला उनी निकै चर्चामा अाएकि छिन । मेघा अडिसन अाजबाट सुरू भएपनि मेनुकाकाे प्रस्तुति कहिले अाउछ भन्ने जानकारी भएकाे छैन ।
नेपाल अाइडलबाट चर्चामा अाएकि मेनुकाकाे गायनलाई देश बिदेशमा बस्ने धेरैले रुचाएका छन । दृष्टिविहिन भएरपनि गित संगितमा राम्राे दख्खल भएकि मुनुकाकाे सारेगामापाका जजहरुले खुलेर तारिफ गर्नुका साथै जुरी जजहरु जर सबै अडियन्सले निकैबेर ताली बजाएर सम्मान समेत गरेका थिए । यतिमात्र नभएर जजहरुले उनकाे गायनमा अाखा रसाएका थिए । एकजना जजले तारिफ गर्दै तिम्राे गायनकाे जजमेन्ट गर्ने मेराे अौकात नभएकाे समेत बताएका थिए ।
मेनुककाे अडिसनकाे प्रस्तुति सामानिक संजाल भरी भाइरल भएकाे थियाे । देश बिदेशमा रहेका सबै नेपालीले यसपटककाे सारेगामापालाइ महत्वका साथ हेरेकाे समेत पाइन्छ । यसरी नेपाल र नेपालीकाे नाम उच्च गर्ने चेलीलाइ सम्मान स्वरुप सबैले सपाेर्ट गरौ । उनकाे अागिमी यात्रामा सबैले सहयाेग र माया देखाइदिन अावस्यक समेत रहेकाे छ ।
Previous Post: सबैभन्दा धेरै भाेट पाउदै बिक्रम पुगे टप ८ मा
Next Post: जानकारीकाे लागि सेयर गराैः कुखुराकाे मासु खाँदा जानसक्छ ज्यान